War yaab leh Oo Kasoo yeedhay Habar Jeclo kadib Labadii nin ee Xalay ay Dilen. – KHAATUMO NEWS
Maleeshiyaad kamid ah maamul beeleedka SNM ee Isaaq gaar ahaan Habar jeclo ayaa xalay Weerar qorshaysan ku dilay Hal nin sidoo kale Ku Dhaawacay nin kale oo labaduba yihiin dhulbahante kana soo Jeeda Buuhoodle.
Weerarkan Maleeshiyada Habar jeclo fulisay waxaa ku naf waayay Hal ruux mid kalana dhaawac ayaa ka soo gaadhay.
Hadaba maanta Ayaa Beesha habar Jeclo, waxay xidhiidh la samaysay Beesha Ninkii Dhintay ee Dhulbahante gaar ahaan Beesha Khaalid, iyadoo usheegtay in ninkaasi u dhintay Cigaal naleeye ahaan balse aysan dooneen Beesha Khaalid.
waxay sheegen in ay diyaar u yihiin inay la xaajeestan Beesha khaaliid.
Talaabadan ayaa ah mid layaab leh in beesha habar Jeclo labo nin oo dhulbahante ah midna dhiigiisa xalaashato midna iska xaaran timayso taaso ah qorshe lagu kala jabinaayo Beesha dhulbahante, oo qeybna loo qoslaayo qeybta kalana laga dhiganaayo Cadow,
Qorshahan foosha xun ayaa kamid ah Damaca foosha xun ee Beesha SNM iyo maamulkoodu ku doonayan in ay ku baabiiyaan beesha Hurdada dheer gashay ee Dhubahante.
Maanta waxay xaaladu marasa Labo nin oo walaalo ah mid inta isaaq xabad ku dhufto oo dilo inuu kii kale ku dhaho adiga kugumaan wadin ee walaalka ayaan kuwaday,
Si kastaba ha Ahaate Dilka dhacay ee Habar Jeclo geesatay waxaa ka daran warka foosha xun ee ay kula soo dhiiraden kuwii ay dilen,
Previous Post: DAAWO:Madaxweyne Siciid Deni Oo Dharka Wasiir Dubbe Muran Galiyay
Next Post: War Deg Deg Ah:Beesha Caalamka Oo Dhambaal Digniin ah U dhiibtay Qoor-Qoor laftagareen iyo Guudlaawe.
dhulbahante iyo isaaq, meel ku kala tegi maayaan, ilaa qiyaamahana wey is dilayaan.
Waa ku saxanyahay yihiin habarjeclo in au sidaa uhadlaan waayo adiga kaa Barten
Isaq waa inaan utashana